အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတတွေနဲ့ သမ္မတကတော်တွေရဲ့အရပ်အမြင့်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
1 Aug 2018 . 11:53 AM
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတတွေမှာ အရပ်အမြင့်တွေ မတူညီကြပေမယ့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် သမ္မတတွေရဲ့အရပ်အမြင့်ဟာ ၅ပေ၁ဝလက်မရှိပါတယ်။ သမ္မတတွေနဲ့ သမ္မတကတော်တွေရဲ့ ပျမ်းမျှအရပ်ခြားနားချက်ဟာ ၆လက်မခွဲရှိတယ်လို့ သိရပြန်ပါတယ်။ သမ္မတကြီး John Adams နဲ့ Abigail Adams တို့ရဲ့အရပ်ခြားနားချက်ဟာ ၁လက်မသာရှိပေမယ့် သမ္မတကြီး Thomas Jefferson နဲ့ Martha Jefferson တို့ကတော့ ၁ပေ၂လက်မခွဲအထိ ကွာပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အရပ်အရှည်ဆုံးသမ္မတကတော့ Abraham Lincoln ဖြစ်ပြီး အရပ်အမြင့်က ၆ပေ၄လက်မရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စတုတ္ထမြောက်သမ္မတ James Madison ကတော့ ၅ပေ၄လက်မသာရှိပြီး အရပ်အနိမ့်ဆုံးသမ္မတဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသမ္မတကြီး Donald Trump ကတော့ ၆ပေ၂လက်မခွဲအထိရှိပြီး စတုတ္ထအရပ်အမြင့်ဆုံးသမ္မတအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်။ ကဲ . . သမ္မတတွေနဲ့ သမ္မတကတော်တွေရဲ့အရပ်အမြင့်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
Thomas Jefferson ဟာ သမ္မတဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မုဆိုးဖိုဖြစ်ပေမယ့် သမီးတော် Martha Jefferson ကပဲ First Lady တာဝန်ကို ယူလိုက်ရပါတယ်။
James and Dolley Madison:3inches (7 cm)
James and Elizabeth Monroe: 1 foot (31 cm)
John Quincy and Louisa Adams: 1.5 inches (3 cm)
Andrew and Rachel Jackson: 1-foot-1-inch (33 cm)
Martin and Hannah Van Buren: Unknown
၁၈၃၇ခုနှစ်ကနေ ၁၈၄၁ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ (၈) ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Martin Van Buren ဟာ ၅ပေ၆လက်မရှိပေမယ့် ဇနီးသည် Hana Van Buren ရဲ့အရပ်အမြင့်ကိုတော့ အတိအကျမသိရပါဘူး။ သူမဟာ Martin Van Buren ဟာ သမ္မတမဖြစ်ခင် ၁၈၁၉ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
William Henry and Anna Harrison: Unknown
William Henry and Anna Harrison
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ (၉) ယောက်မြောက် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ William Henry Harrison ဟာ အရပ် ၅ပေ၈လက်မ ရှိပေမယ့် ဇနီးသည် Anna Harrison ရဲ့အရပ်ကိုတော့ မသိရပါဘူး။
John and Julia Tyler:9inches (23 cm); John and Letitia Tyler: Unknown
John and Julia Tyler and Letitia Tyler
၁၈၄၁ခုနှစ်ကနေ ၁၈၄၅ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ (၁ဝ) ယောက်မြောက် သမ္မတကြီး John Tyler ဟာ ဇနီးသည်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ပထမဇနီးသည် Letitia Tyler ဟာ ၁၈၄၂ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ Julia Tyler ကို ၁၈၄၄ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယဇနီးသည် Julia Tyler ဟာ ၅ပေ၃လက်မရှိတယ်လို့ သိရပေမယ့် Letitia Tyler ရဲ့အရပ်ကိုတော့ မသိရပါဘူး။
James K. and Sarah Polk:6inches (16 cm)
James K. and Sarah Polk
Zachary and Margaret Taylor: Unknown
၁၈၄၉ခုနှစ်က ၁၈၅ဝခုနှစ်အတွင်း (၁၂) ယောက်မြောက် သမ္မတရာထူးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Zachary Taylor ရဲ့အရပ်ဟာ ၅ပေ၈လက်မရှိတယ်လို့ သိရပေမယ့် ဇနီးသည် Margaret Taylor ရဲ့အရပ်ကိုတော့ မှတ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြမထားပါဘူး။
Millard and Abigail Fillmore:3inches (7 cm)
Franklin and Jane Pierce:5inches (13 cm)
James Buchanan and Harriet Lane:5inches (13 cm)
James Buchanan ဟာ တစ်ကိုယ်တည်းလူပျိုကြီးဖြစ်တာကြောင့် တူမတော် Harriet Lane ကိုပဲ First Lady အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Abraham and Mary Lincoln: 1-foot-2-inches (36 cm)
Andrew and Eliza Johnson: 1-foot-1-inch (33 cm)
Ulysses S. and Julia Grant: Unknown
Ulysses S. and Julia Grant
(၁၈) ယောက်မြောက် သမ္မတကြီး Ulysses S. Grant ဟာ အရပ် ၆ပေရှိပေမယ့် ဇနီးသည် Julia Grant ရဲ့အရပ်ကိုတော့ အတိမကျမသိရပါဘူး။
Rutherford B. and Lucy Hayes: 4.5 inches (11 cm)
James A. and Lucretia Garfield:9inches (23 cm)
Chester A. and Ellen Arthur: Unknown
Chester A. and Ellen Arthur
Chester A. Arthur ဟာ မုဆိုးဖိုတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သမ္မတဖြစ်လာချိန်မှာ နှမတော် Ellen Arthur ကပဲ First Lady အဖြစ် တာဝန်ယူရပါတယ်။ Ellen Arthur ရဲ့အရပ်ကိုတော့ အတိအကျမသိရပါဘူး။
Grover and Frances Cleveland:4inches (10 cm)
Benjamin and Caroline Harrison:5inches (13 cm)
William and Ida McKinley: Unknown
သမ္မတကတော် Ida McKinley ရဲ့အရပ်ကို အတိအကျမသိရပါဘူး။
Theodore and Edith Roosevelt:3inches (8 cm)
William Howard and Helen Taft: 7.5 inches (19 cm)
Woodrow and Edith Wilson:2inches (5 cm); Woodrow and Ellen Wilson: 8 inches (20 cm)
Woodrow , Edith Wilson and Ellen Wilson
သမ္မတကြီး Woodrow Wilson ရဲ့ ပထမဇနီးဟာ Ellen Wilson ၁၉၁၄ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ၁၉၁၅ခုနှစ်မှာ Edith Wilson ကို လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
Warren G. and Florence Harding:5inches (13 cm)
Warren G. and Florence Harding
Calvin and Grace Coolidge:6inches (15 cm)
Herbert and Lou Hoover: 3.5 inches (9 cm)
Franklin D. and Eleanor Roosevelt:3inches (8 cm)
Harry S. and Bess Truman:5inches (12 cm)
Dwight D. and Mamie Eisenhower: 9.5 inches (24 cm)
John F. and Jackie Kennedy:5inches (12 cm)
Lyndon B. and Lady Bird Johnson: 9.5 inches (24 cm)
Richard and Pat Nixon: 5.5 inches (14 cm)
Gerald and Betty Ford:9inches (23 cm)
Jimmy and Rosalynn Carter: 4.5 inches (12 cm)
Ronald and Nancy Reagan:9inches (22 cm)
George H.W. and Barbara Bush: 11 inches (28 cm)
Bill and Hillary Clinton: 8 inches (20 cm)
George W. and Laura Bush: 5.5 inches (14 cm)
Barack and Michelle Obama:2inches (5 cm)
၁၉ ရာစုတုန်းက သမ္မတကတော်တွေရဲ့အရပ်အမြင့်တွေဟာ နှစ်ရာချီကြာမြင့်ပြီဖြစ်တာကြောင့် အတိအကျမသိခဲ့ရပါဘူး။ First Lady ဆိုတာ သမ္မတကတော်ရာထူးဆိုပေမယ့် တချို့သမ္မတတွေဟာ ဇနီးကွယ်လွန်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် လူပျိုကြီးဖြစ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိုးတွေကပဲ First Lady ရာထူးကို ယူကြရပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် အမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့အရပ်အမြင့်ကို လေ့လာရင်း ဗဟုသုတဖြစ်လောက်ပြီလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ သမ်မတတှနေဲ့ သမ်မတကတျောတှရေဲ့အရပျအမွငျ့တှကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ခွငျး
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ သမ်မတတှမှော အရပျအမွငျ့တှေ မတူညီကွပမေယျ့ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ သမ်မတတှရေဲ့အရပျအမွငျ့ဟာ ၅ပေ၁ဝလကျမရှိပါတယျ။ သမ်မတတှနေဲ့ သမ်မတကတျောတှရေဲ့ ပမျြးမြှအရပျခွားနားခကျြဟာ ၆လကျမခှဲရှိတယျလို့ သိရပွနျပါတယျ။ သမ်မတကွီး John Adams နဲ့ Abigail Adams တို့ရဲ့အရပျခွားနားခကျြဟာ ၁လကျမသာရှိပမေယျ့ သမ်မတကွီး Thomas Jefferson နဲ့ Martha Jefferson တို့ကတော့ ၁ပေ၂လကျမခှဲအထိ ကှာပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံမှာ အရပျအရှညျဆုံးသမ်မတကတော့ Abraham Lincoln ဖွဈပွီး အရပျအမွငျ့က ၆ပေ၎လကျမရှိပါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့စတုတ်ထမွောကျသမ်မတ James Madison ကတော့ ၅ပေ၎လကျမသာရှိပွီး အရပျအနိမျ့ဆုံးသမ်မတဖွဈပါတယျ။ လကျရှိသမ်မတကွီး Donald Trump ကတော့ ၆ပေ၂လကျမခှဲအထိရှိပွီး စတုတ်ထအရပျအမွငျ့ဆုံးသမ်မတအဖွဈ မှတျတမျးဝငျပါတယျ။ ကဲ . . သမ်မတတှနေဲ့ သမ်မတကတျောတှရေဲ့အရပျအမွငျ့တှကေို နှိုငျးယှဉျကွညျ့ရအောငျ။
Thomas Jefferson ဟာ သမ်မတဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ မုဆိုးဖိုဖွဈပမေယျ့ သမီးတျော Martha Jefferson ကပဲ First Lady တာဝနျကို ယူလိုကျရပါတယျ။
၁၈၃၇ခုနှဈကနေ ၁၈၄၁ခုနှဈအတှငျး အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ (၈) ယောကျမွောကျ သမ်မတအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ Martin Van Buren ဟာ ၅ပေ၆လကျမရှိပမေယျ့ ဇနီးသညျ Hana Van Buren ရဲ့အရပျအမွငျ့ကိုတော့ အတိအကမြသိရပါဘူး။ သူမဟာ Martin Van Buren ဟာ သမ်မတမဖွဈခငျ ၁၈၁၉ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ (၉) ယောကျမွောကျ သမ်မတအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ William Henry Harrison ဟာ အရပျ ၅ပေ၈လကျမ ရှိပမေယျ့ ဇနီးသညျ Anna Harrison ရဲ့အရပျကိုတော့ မသိရပါဘူး။
၁၈၄၁ခုနှဈကနေ ၁၈၄၅ခုနှဈအတှငျး အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ (၁ဝ) ယောကျမွောကျ သမ်မတကွီး John Tyler ဟာ ဇနီးသညျနှဈယောကျရှိပါတယျ။ ပထမဇနီးသညျ Letitia Tyler ဟာ ၁၈၄၂ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျသှားတဲ့အခါ Julia Tyler ကို ၁၈၄၄ခုနှဈမှာ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယဇနီးသညျ Julia Tyler ဟာ ၅ပေ၃လကျမရှိတယျလို့ သိရပမေယျ့ Letitia Tyler ရဲ့အရပျကိုတော့ မသိရပါဘူး။
၁၈၄၉ခုနှဈက ၁၈၅ဝခုနှဈအတှငျး (၁၂) ယောကျမွောကျ သမ်မတရာထူးကို ထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ Zachary Taylor ရဲ့အရပျဟာ ၅ပေ၈လကျမရှိတယျလို့ သိရပမေယျ့ ဇနီးသညျ Margaret Taylor ရဲ့အရပျကိုတော့ မှတျတမျးတှမှော ဖျောပွမထားပါဘူး။
James Buchanan ဟာ တဈကိုယျတညျးလူပြိုကွီးဖွဈတာကွောငျ့ တူမတျော Harriet Lane ကိုပဲ First Lady အဖွဈ သတျမှတျထားပါတယျ။
(၁၈) ယောကျမွောကျ သမ်မတကွီး Ulysses S. Grant ဟာ အရပျ ၆ပရှေိပမေယျ့ ဇနီးသညျ Julia Grant ရဲ့အရပျကိုတော့ အတိမကမြသိရပါဘူး။
Chester A. Arthur ဟာ မုဆိုးဖိုတဈယောကျဖွဈပွီး သမ်မတဖွဈလာခြိနျမှာ နှမတျော Ellen Arthur ကပဲ First Lady အဖွဈ တာဝနျယူရပါတယျ။ Ellen Arthur ရဲ့အရပျကိုတော့ အတိအကမြသိရပါဘူး။
သမ်မတကတျော Ida McKinley ရဲ့အရပျကို အတိအကမြသိရပါဘူး။
သမ်မတကွီး Woodrow Wilson ရဲ့ ပထမဇနီးဟာ Ellen Wilson ၁၉၁၄ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပွီး ၁၉၁၅ခုနှဈမှာ Edith Wilson ကို လကျထပျခဲ့ပါတယျ။
၁၉ ရာစုတုနျးက သမ်မတကတျောတှရေဲ့အရပျအမွငျ့တှဟော နှဈရာခြီကွာမွငျ့ပွီဖွဈတာကွောငျ့ အတိအကမြသိခဲ့ရပါဘူး။ First Lady ဆိုတာ သမ်မတကတျောရာထူးဆိုပမေယျ့ တခြို့သမ်မတတှဟော ဇနီးကှယျလှနျသှားရငျပဲဖွဈဖွဈ ဒါမှမဟုတျ လူပြိုကွီးဖွဈရငျပဲဖွဈဖွဈ သူတို့နဲ့ အနီးစပျဆုံးဆှမြေိုးတှကေပဲ First Lady ရာထူးကို ယူကွရပါတယျ။ ဒီလောကျဆိုရငျ အမရေိကနျသမ်မတတှရေဲ့အရပျအမွငျ့ကို လလေ့ာရငျး ဗဟုသုတဖွဈလောကျပွီလို့ သုံးသပျမိပါတယျ။